ကြယ်ပြာ| January 9, 2013 | Hits:1,499
| | ကရင်နီ ပြည်နယ်အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည့် ကယားပြည်နယ်၏ နာမည်ကျော် တောင်ကွဲစေတီတော် (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းညီဟန် / ဧရာဝတီ)
အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် UNA တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးစစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး တမျိုးသားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံ ကျင်းပမည်ပအိုဝ်းအမျိုးသား တပ်မတော် ပြည်သူ့စစ် ကွပ်ကဲရေးမှူးနှင့် ...ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုပါတီ ထူထောင်ရေး တိုင်းရင်းသား ၁၅ ပါတီ သဘောတူညီအစိုးရတပ်နှင့် TNLA တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Salai Lian January 9, 2013 - 10:53 am	The people from the state has the right to change and the right to call their state’s name as they want. The government has to approve whatever changes the state has done. Decentralization must beamust in democratic Union.